ग्याष्टिक कस्तो रोग हो ? कसरी बच्न सकिन्छ ? ग्याष्टिक भएको कसरी थाहा पाउने ? | rochak nepali khabarside
यदि अल्सर नै भैसकेको रहेछ भने ट्रिपल थेरापी गर्नुपर्छ । यदि घाँउ छ भने औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पित्त थैलिमा पत्थरी भयो भने पनि ग्याष्टिक जस्तो समस्या देखा पर्नसक्छ । यदि यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने पित्त थैलिको पत्थरीको अप्रेसर नगरी यसको समस्या कम हुदैन । हायटस हर्नियामा आमाशय फर्केर खाने नली माथि सरेर गएको छ भने पनि अप्रेसन नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।news24nepal